हिजो कांग्रेस महाधिवेशनको दिन काठमाडौं उपत्यकामा इतिहाँसमै सवैभन्दा वढि क’ण्डम, ग’र्भनि’रोधक अस्थायी साधनको माग – List Khabar
Home / समाचार / हिजो कांग्रेस महाधिवेशनको दिन काठमाडौं उपत्यकामा इतिहाँसमै सवैभन्दा वढि क’ण्डम, ग’र्भनि’रोधक अस्थायी साधनको माग
हिजो कांग्रेस महाधिवेशनको दिन काठमाडौं उपत्यकामा इतिहाँसमै सवैभन्दा वढि क’ण्डम, ग’र्भनि’रोधक अस्थायी साधनको माग
admin December 12, 2021 समाचार Leaveacomment 119 Views
कांग्रेस महाधिवेशनको कारण काठमाडौं उपत्यकामा ग’र्भनिरो’धक अ’स्थायी साधनको बिक्री बढेको छ ।
बजार क्षेत्रका औ’षधी पसल, अस्पताल रोडका नीजि अस्पतालहरुमा अ’स्थायी साधन खरिदविक्रि वढेको वताईएको छ।
विशेष गरी क’ण्डम, ग’र्भ नि’रोधक च’क्कीहरु पि’ल्स, ए’स्ट्रोजेन, मि’निपिल तथा केही सु’ईहरुको माग बढेको औ’षधी ब्यवसायीहरु वताउँछन् ।
जथाभावी क’ण्डम तथा पि’ल्स विक्रि हुन थालेपछि औ’षधी पसले भने रु’ष्ट छन्। ज’थाभावी अस्थायी साधन विक्रि हुँदा समेत नियन्त्रण गर्ने नि’कायले वे’वास्ता गरेको उनीहरुको गु’नासो छ।
कांग्रेसको अ’धिवेशनका कारण अहिले काठमाडौं उपत्यकामा सवै होटलहरु ख’चाखच भरिएका छन् । जसमा प्राय जो’ड़ी, प्रेमी र धेरै जसो द’म्पत्तिहरु नै सहभागी छन् । त्यसैले पनि अ’स्थायी साधनको माग व’ढेको हुन सक्ने औ’षधी ब्य’वसायीहरुको अनुमान छ।
एक ब्यवसायीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा इतिहाँसमै पहिलो पटक यति धेरै अ’स्थायी साधनको माग भएको हो।
Previous भोलि मङ्सिर २६ गते आईतबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
Next झुक्किएर पनि नखानुहोस् यस्ता खालले आलु, नत्र हुनसक्छ हाम्रो स्वास्थ्यलाई यस्तो असर